Tag: fifanarahana haavo serivisy | Martech Zone
Tag: fifanarahana haavon'ny serivisy
Alarobia, Desambra 30, 2020 Alakamisy 4 martsa 2021 Douglas Karr
Nisy namana tsara sy mpanoro hevitra nanoratra nametraka fanontaniana tamiko ary tiako hampiasa ny valinteniko amin'ity lahatsoratra ity. Ny fanontaniany dia nifantoka bebe kokoa tamin'ny indostria iray (mailaka), noho izany dia nataoko ankapobeny ny valinteniko tamin'ny API rehetra. Nanontany izy hoe inona no fanontaniana tokony hapetraky ny orinasa amin'ny mpivarotra momba ny API alohan'izy ireo misafidy. Fa maninona no mila API? Ny interface programa (API) dia ny interface izay rafitra informatika, tranomboky,